Singapore: Zavona Lasa Havandra Tsy Ampy Herinandro Akory · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Jolay 2013 3:35 GMT
#sghaze [zavona (na setroka) eto Singapore] lasa #sghail [havandra eto Singapore]. Taorian'ny fisian-javona be indrindra (na fahalotoa-tsetroka be indrindra) dia tratran'ny orambaratra nitondra havandra i Singapore.
Ny setroka nateraky ny doro ala tany Indonezia no fandotoan-drivotra ratsy indrindra tany Singapore tao anatin'ny taona maromaro izao. Maro ny olona no faly tamin'ny nahatongavan'ny orana nirotsaka tao Singapore tamin'ny fiatombohan'ny herinandro satria nanamora kokoa ny fisefoana tanaty setroka izany saingy zendana ry zareo raha nahita ny havandra latsaka tao amin'ny firenena ny talata folakandro.
SimonTay78.com nahatsapa fa tahaka ny tafio-drivotra mahery ilay izy:
Naheno tahaka ny tafio-drivotra hafahafa avy amin'ny varavarankely aho fa tsy avy nandritra ny volana jona hatramin'ny androany.
Tampoka teo avy eo dia nanomboka niraradraraka miaraka ny rivotra mifofofofo tsy mbola fahitako hatrizay ny orana.
Nidina aho dia nahita rantsakazo kely sy lehibe maro teny amin'ny tany ary nisy dadatoako iray nanatona ahy niteny fa tara aho haka an-dahatsary ny havandra
Andy Giger nandrakitra ity lahatsarin'ny havandra ity:
Nitatitra i Suhailah fa nanjera hazo maro ny havandra:
Raha miaina eto Singapore ianao dia mety mahafantattra ny toetrandro hafa diavin'ny firenena amin'izao fotoana izao, Nanomboka tamin'ny setroka mampatahora andro vitsivitsy lasa izay ka hatramin'ity havandra tsy nampoizina ity (na orandranomandry, tahaka ny ranomandry vaventy tsotra izao) tamin'ity folakandro ity… Fa tena mampatahotra ilay havandra. Manomboka midaboka, mandratra olona maro, ny hazo. Nampianjera na namoritra andrin-jiro maro. Mampangovitra ihany an! Ny tiako lazaina dia tsy mbola nahita zavatra tahaka izao aho taloha
Tamin'ny ankapobeny dia tany amin'ny faritra andrefan'i Singapore no tena nisy ny havandra:
Androany dia nanao soamiditra ny orana nandrasana fatratra ka nampisento ny Singaporeana maro sempotrempotra tao anatin'ny roa andro noho ny setrok'i Indonezia nameno ny lanitra ambonintsika.
Maro ny tatitra firotsahan'havandra tany amin'ny toerana maro tany amin'ny faritra andrefan'i Singapore tahaka ny any Chua Chu Kang, Bukit Batok ary Jurong Atsinanana
Maro ny olona nieritreritra fa vokatry ny rahona (norarahana sira) na orana asidra ny havandra. Namoaka fanazavana ny ao amin'ny Sampan-draharaha Nasionalin'ny Tontolo Iainana:
Misy ny honohono fa ny havandra (orampanala vaventy) hita tany amin'ny faritra andrefan'i Singapore tanelanelan'ny 1 ora folakandro ka hatramin'ny 4 ora sy sasany tamin'ny 25 jona 2013 dia avy amin'ny orana asidra na orana natao izay hahalatsaka azy avy any Indonezia. Izay diso ihany.
Raha ny marina dia ankavitsiana no ahitana havandra aty amin'ny faritra tropika izay mitsonika mandra-pilatsaka amin'ny tany. Amin'ny ankapobeny dia indray isa-taona na isaky ny roa taona no ahitana havandra eto Singapore
Ho an'i Bertha Henson, ny havandra dia mety ho famantaran’-javatra hafa:
Ny amin'ny havandra, mety ho famantarana fa efa tonga ny apokalipsa na iraka avy any an-danitra fa mbola misy rano any ambony any
Na zavona io na havandra, ny voina faraparan'ny Singapore teo dia itsapana ny fanekena tsy fidin'ny olona:
Fanamby lehibe itsapana ny fanekena tsy fidiny amin'ny mahavahoaka antsika ny zavona. Hatramin'izao dia nanao izany isika nandritra ny 48 taona. Efa manatona ny faha-50 taona ny fahaleovantenantsika isika ary tokony hirehareha. Saingy alohan'ny hahatongavan'izany, tsy maintsy maka fotoana hieritreretana isika, hanontany ny tenantsika : iza isika? inona no mamaritra antsika?